Ukuvavanya ibhetri entsha yeMagSafe ye-iPhone 12 | IPhone iindaba
ULuis Padilla | 29/07/2021 21:07 | Ukuhlaziywa ukuba 29/07/2021 21:08 | Izixhobo ze-IP, Ezahlukeneyo
Ukusukela oko kwangeniswa kwenkqubo yeMagSafe evumela umanyano lwetyala le-12 le-magnetic, wonke umntu wayenoncedo olufanelekileyo kule teknoloji intsha: ibhetri ephathekayo. Ukwazi ukwenza kwakhona i-iPhone yakho ngesixhobo esincinci esiza kuthi sincanyathiselwe kwifowuni ngaphandle kwesidingo seentambo Yinto ethile ebesinokuthi kwiminyaka embalwa besingakwazi nokuphupha ngayo, kwaye ngoku iyinyani. Kwakucacile ukuba iApple kufanelekile ukuba icinge ngayo, kwaye nangona abanye abavelisi babelindele, sele sinalo ibhetri ephathekayo egama linguMagSafe Battery Pack.
1 Incinci kwaye ilula kodwa inqabile?
2 Inkqubo yeMagSafe
3 Ukulula kunye nokuguquguquka
Incinci kwaye ilula kodwa inqabile?
Ibhetri entsha yeMagSafe iyazifezekisa iinkcukacha ezilindelekileyo. Incinci kwi-115 yeegram kwaye ityebile kancinane kune-12 ye-iPhone, le bhetri emile nebhetri ifumaneka kuphela emhlophe. Ubume bayo beplastiki emhlophe matte yayimangalisiwe, njengoko uninzi lwethu lwalulindele ukuba i-silicone emhlophe emhlophe eyayisetyenziswa yiApple kwityala layo lebhetri. Mhlawumbi luyimpumelelo lo mbandela ngokuqinisekileyo omelana ngcono nokuhamba kwexesha, kuba i-silicone emhlophe ayijamelani nokuhlaselwa kwangaphandle kakuhle. Isinxibelelanisi sombane kunye ne-LED encinci ecaleni kwayo kuphela kwezinto esinokuthi siziqaqambise. Isinxibelelanisi sokugcwalisa kwakhona ibhetri (okanye i-iPhone njengoko siza kubona kamva), kunye nesibane se-LED ukubonisa imeko yokutshaja, kunye ne-Apple ye-orenji kunye nemibala eluhlaza. Icandelo elincamathele kwi-iPhone ligutyungelwe ngwe-silicone engwevu ukukhusela umphezulu weglasi yefowuni.
Olunye ukumangaliswa kweza ngohlobo lokutshaja amandla: i-1.460mAh ebonakala inqabile kakhulu ukuba ingafumana ukuvuselelwa okuphakathi kweefowuni zethu. Kuninzi ebhaliweyo malunga neli nani, ngokuqinisekileyo, kodwa kukho iinkcukacha ezibalulekileyo abaninzi abafuna ukuzihoya. Umzekelo, i-voltage iphindwe kabini kuninzi lweebhetri zolu hlobo (7,62V), esinika i-11,12W iyonke oko kuthetha ukuba, ngokwenza oko, Singayithelekisa le bhetri kunye nabanye abaphindwe kabini, malunga ne-2.900mAh. Ngamandla okutshaja, le bhetri yeMagSafe iwuzalisekisa ngokugqibeleleyo umsebenzi eyenzelwe wona: ukunika i-iPhone amandla ukuze ikwazi ukuhlala imini yonke ngokusetyenziswa kakhulu.
Njengoko igama layo libonisa, ibhetri isebenzisa inkqubo yeMagSafe ukwenza isixhobo sakho kwakhona kwaye uqhagamshele kwi-iPhone yakho. Iimagnethi kwi-iPhone kunye nebhetri ngokwayo ziqhotyoshelwe ngomazibuthe ukuze ihlale kwindawo efanelekileyo kwaye ungasebenzisa i-iPhone yakho ngelixa uyisebenzisa. Ukubambelela kulungile okanye akunjalo, kuxhomekeke ekubeni uyayisebenzisa ngetyala kwi-iPhone okanye hayi. Yinto esele ndiyibonile ngazo zonke izixhobo zeMagSafe endizamile: ukuba uzisebenzisa nge-iPhone "ze" ukubambelela akwanele, kwaye naphambi kwayo nayiphi na ingcinezelo esecaleni ivela ngokulula. Nangona kunjalo, izinto zitshintsha kakhulu xa usongeza isiciko kwiseti. Ewe kunjalo kufuneka ibe yimeko "yeMagSafe", eya ixhaphake kakhulu kwikhathalogu yabavelisi abaphambili abanjengoNomad okanye uSpigen, ukongeza kumatyala asemthethweni eApple.
Ukubambelela kwi-holster ehambelanayo kulungile, kwaye i-holster inokutyibilika ngokulula kuyo nayiphi na ipokotho yebhulukhwe ngaphandle kokuqhawula kwi-iPhone, njengokuyikhupha. Ewe kunjalo, koobhaka, iibhegi, iidyasi, njl. Inkqubo yeMagSafe ilapha ukuze ihlale Kwaye ayindimangalisi into yokuba abanye abavelisi bexelisa loo nto, kuba ivula umhlaba ogcwele izinto ezinokubakho kwifowuni yethu. Ayaneli kunikezela ngokulula ngokubhekisele ekunikeni nasekunciphiseni, kodwa ikwanceda inkqubo yokutshaja ngaphandle kwamacingo, engasebenziyo ngokwenkcazo, ukuphucula koku, ukuchitha amandla amancinci kuba ulungelelwano phakathi kweekhoyili zentsimbi zilungile.
Ukulula kunye nokuguquguquka
Ibhetri yeMagSafe isebenza njengebhetri yeApple yamatyala kwizizukulwana ezidlulileyo. Akukho amaqhosha amandla, snap on kwaye uyitshaje kwakhona, ususe kwaye ucime umbane. Kodwa kukho umahluko obonakalayo, kuba ngelixa ityala belinxityiwe ukusukela oko wemka ekhaya, le bhetri yeMagSafe inokuqhutywa epokothweni yakho kwaye ibekwe kuphela xa uyidinga, luphuculo olukhulu. Kutheni usongeza iqhosha lamandla? Ukuba awuzukuyisebenzisa, into eqhelekileyo kukuba awuyiphathi i-iPhone nge "hump", kwaye xa uyidinga, uyibeke endaweni kwaye yiyo leyo.
Nangona kunjalo, ityala linomsebenzi ontsonkothileyo, ewe, elubala ngokupheleleyo kumsebenzisi. Ungayitshaja kwakhona i-iPhone yakho ngamandla e-5W, okanye i-15W, Kuxhomekeka kwindlela oyisebenzisa ngayo. Inokuphinda igcwaliswe ngentambo yombane, okanye nge-iPhone. Kwaye ikhathalela ibhetri yakho ye-iPhone ngokucima nje ukuba ifowuni ifike kwi-90% yokutshaja kwakhona. Yiyo kuphela kwintengiso enokwenza konke oku, kwaye iyakwenza oko ngaphandle kokuba umsebenzisi asebenzise iimenyu okanye ucofe amaqhosha.
Ukuba ubeka ibhetri yeMagSafe kwi-iPhone yakho uyakufumana ugcwaliso ngokutsha lwe5W oluza kuhlala malunga neeyure ezi-2 de ibhetri yangaphandle ikhutshwe ngokupheleleyo. Ipesenti yokutshaja kwakhona kwe-iPhone iya kuxhomekeka kwimodeli, kunye neyona incinci ibe yeyabo iya kufumana ipesenti ephezulu, njengoko kucacile:
I-iPhone 12 mini: 80% eyongezelelweyo
I-iPhone 12 kunye ne-12 Pro: eyongezelelweyo 60%
I-iPhone 12 Pro Max: eyongezelelweyo iipesenti ezingama-50
Ngaba uyitshaja encinci? Ukuba uyithelekisa nebhetri ye-20.000mAh yangaphandle, ngaphandle kwamathandabuzo. Kodwa umbono wale bhetri yeMagSafe ayisiyi kuyitshaja kwakhona i-iPhone yakho amatyeli aliqela. Kuxhomekeka kwi-iPhone onayo, Ungakanani ibhetri eyongezelelweyo oya kuyidinga ngezo mini zokusetyenziswa kakhulu ukuze ungaphelelwa ngumnxeba emva kwemini? Ndicinga ukuba la manani ndiwabeke apha ngasentla azakusondela kule nto ubuyicinga. Injongo yebhetri yeMagSafe kukufumana usuku lonke ngaphandle kokubetha. Njengomsebenzisi we-iPhone 12 Pro Max, ndingazibala iintsuku xa ndiphelelwa ngamandla ebhetri kwiminwe yezandla zombini, kodwa zikhona. Ukuba bendinayo loo "bhetri" ibhetri yeMagSafe ibizakubamba ngaphandle kwengxaki.
Elinye icala eligxekwa kakhulu kukucotha kokuphinda usebenze kwakhona: iiyure ezi-2. Andiyiboni ingxaki, kuba ibhetri inamathele kwi-iPhone yam kwaye ndinokuqhubeka ndiyisebenzisa ngaphandle kwengxaki. Ngale veki ndikwazile ukuyizama amatyeli aliqela, kwaye kulungile ukuba uyinxibe, ayikhathazi xa usebenzisa i-iPhone, ke Andikhathali nokuba ithatha iyure okanye ezimbini, ayongezi kwanto kwisigqibo sam sokugqibela malunga nebhetri yeMagSafe.
Kodwa oku akunjalo, kuba ukuba ndidibanisa le bhetri kwitshaja ye-20W okanye nangaphezulu, iya kuba nakho ukuyitshaja kwakhona i-iPhone yam ngamandla e-15W. Oko kukuthi, ibhetri yeMagSafe inokuba sisiseko esifanelekileyo sokutshaja kuhambo lwethu. Iinkcukacha ezibalulekileyo kukuba inokutshaja nasiphi na isixhobo esihambelana nokutshaja kweQi, nangona ingayi kwenza njalo nge-15W okanye isebenzise inkqubo yeMagSafe, kodwa umzekelo inokuphinda igcwalise ii-AirPod zam. Ukugqibelela kukhenketho, njengoko sisiseko sokutshaja se-iPhone kunye nee-AirPods, endinokuziphatha epokothweni ukuphinda ndivuselele ifowuni ukuba ndiyayifuna. Ewe kunjalo, itshaja ye-20W kunye ne-USB-C ukuya kwi-Lightning cable kuya kufuneka ibekwe nguwe, kuba akukho namnye kubo obandakanyiweyo ebhokisini (akukho luvo).
Ibhetri yeMagSafe isincedile ukuba siqinisekise ngokuqinisekileyo ukuba i-iPhone 12 ikubuyisile ukutshaja, oko kukuthi, inokuthi isebenze njengesiseko sokutshaja kwaye isebenzise ibhetri yayo ukuvuselela ezinye izixhobo ezihambelana nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Okwangoku (kwaye ngokuqinisekileyo oku ngekhe kutshintshe) inikwe umda kwibhetri yeMagSafe, enokutshajazwa nje ukuba iqhotyoshelwe kwi-iPhone yethu kwaye idityaniswe kwitshaja. Kodwa le recharge ibhetri icotha kakhulu, ayinantsingiselo. Kungcono ukudibanisa ibhetri kwitshaja kwaye uyivumele kunye nokutshaja kwakhona kwe-iPhone. Ewe kunjalo, inokuphinda igcwaliswe kwakhona ngokwayo ngentambo yombane, ukugcwalisa intlawulo epheleleyo malunga neyure enye kunye nemizuzu eli-1.
Ibhetri yeMagSafe izalisekisa ngokugqibeleleyo umbono okhulelweyo: ukuphinda wenze i-iPhone kwakhona ukuze ihlale imini yonke kwiintsuku ezinzulu apho phakathi kwemini kuhlala kukushiya ulele. Ngaba ungayifaka kwakhona i-iPhone ngaphezulu? Kunjalo. Ngaba ingakhawuleza? Kanjalo. Kodwa kuya kufuneka ufumane ulungelelwaniso phakathi kobukhulu kunye nokusebenza, kwaye ndicinga ukuba into eyenziwe ngu-Apple ngale bhetri ichanekile. Ngaba ufuna ibhetri enkulu yokuphinda usebenze kwakhona? Ayilulo udidi lwemveliso le bhetri yeMagSafe iwela kuyo. Ngaba zikhona iibhetri ezingabizi kakhulu? Ewe kunjalo, kodwa akukho namnye kubo onazo zonke izinto asinika zona uApple. Ngaba kufanelekile ukuhlawula i- € 109 ngayo? Ndikushiya kukhetho lwakho emva kokwazi zonke iinkcukacha zalo. Ukuba unomdla, ungayithenga kwiApple kwi esi sixhobo.
Ithunyelwe nge: 29 de julio de 2021
Utshintsho lokugqibela: 29 de julio de 2021
Inkqubo yokutshintsha kwakhona
Inkqubo yeMagSafe, ikhululekile kwaye ilula
Ingasetyenziselwa njengesiseko sokutshaja ngokukhawuleza
Ukugcwalisa kwakhona i-5W
Buyisela kwakhona ukuya kuthi ga kwi-50% ye-iPhone 12 Pro Max
Ayibandakanyi iadaptha okanye intambo
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Izixhobo ze-IP » Ukuvavanya ibhetri entsha yeMagSafe ye-iPhone 12